कतिलाई जाँच्ने ? कसलाई जाच्ने ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २७, २०७७ समय: ६:५५:२९
काठमाडौं । असार १९ गते ४ हजार ४ सय ८३ जनाको पीसीआर परीक्षण गरियो। ७ सय ४० जनामा संक्रमण पाइयो। यो १६.५ प्रतिशत हो। जब कि साउन १९ गते १० हजार ७ सय ६८ जनाको जाँच गरियो। यसमा २.१ प्रतिशत अर्थात् २ सय २४ जनामा कोरोना पोजेटिभ आयो।